19 Feb 2019 . 10:24 AM
ဓမ္မတာလာခြင်းဟာ အသက်(၁၅) နှစ်အရွယ်ကနေ အသက်(၅၀) အရွယ်ထိ အမျိုးသမီးတိုင်း လစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်းမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မတူညီတဲ့ ပြဿနာမျိုးစုံကို တွေ့ကြုံခံစားရကြပါတယ်။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခါနီး၊မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရှိတဲ့ အချိန်မျိုး နီးကပ်လာတဲ့အခါမျိူးမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နေကြ ရာသီလာခြင်းကို နောက်ကျမှ လာစေချင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို နောက်ကျမှ လာစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သောက်သုံးလို့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေရှိပေမယ့် ဒီဆေးဝါးတွေဟာ အန္တရာယ်ရှိပြီး မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါတွေကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုဆေးဝါးတွေကို သောက်သုံးမယ့်အစား သဘာဝဆေးဝါးတွေကို အသုံးပြုပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိ ဘဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ နှောင့်နှေးအောင် လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေများရှိမလားဆိုပြီး ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ လူတိုင်းအတွက် ထိရောက်ချင်မှ ထ်ိရောက်နိုင်တာပါပဲ။ ဒီတော့ ဘယ်နည်းလမ်းတွေက ကိုယ်နဲ့အလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာကို သိရအောင် စမ်းလုပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Apple Cider Vinegar ကို စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာယူပြီး ရေတစ်ခွက်နဲ့ ရောနှောပါ။ အဲဒီအရောအနှောကို အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ သောက်သုံးပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သဘာအတိုင်း ရာသီလာခြင်းကို နှောင့်နှေးအောင် လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ကုလားပဲကို အမှုန့်ဖြစ်အောင် ကြိတ်ချေပါ။ အဲဒီအမှုန့်နဲ့ Gram Flour ကို ရောနှောပြီး ဒယ်အိုးထဲထည့်ကာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ကျိုချက်ပါ။ စွပ်ပြုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆို Gram Flour က အခြေခံကျတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစွပ်ပြုတ်ကို ရာသီမလာခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုထဲက ကြိုသောက်ထားပေးပါ။
Raspberry အရွက် ငါးရွက် ခြောက်ရွက်လောက်ကို ယူပြီး လက်ဖက်ရည်ပြုလုပ်ပါ။ ဒီလက်ဖက်ရည်ကို ဓမ္မတာမလာခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုထဲက ကြိုသောက်ထားပေးပါ။
တရုတ်နံနံအရွက်အနည်းငယ်ကို ယူပြီး ရေလီတာဝက်နဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်ကျိုချက်ပေးပါ။ အဲဒီကျိုချက်ထားတဲ့ အထဲကို ပျားရည်စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းလောက်နဲ့ ရောနှောပေးပါ။ ရာသီမလာခင် သုံးလေးငါးရက်လောက်ထဲက အဲဒီအရောအနှော လက်ဖက်ရည် တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လောက် သောက်ပေးပါ။
ဗိုလ်စားပဲကို ရေတစ်ရာမီလီလီတာနဲ့ သုံးမိနစ်ကနေ လေးမိနစ်လောက်အထိ ပြုတ်ပေးပါ။ အဲဒီပြုတ်ထားတဲ့အထဲကို လီမွန်ဖျော်ရည်အနည်းငယ် ရောထည့်ပါ။ ရာသီမလာခင် ငါးရက်လောက်အလိုမှာ ဒီအရောအနှောကို သောက်ပေးရင် ထူးခြားတဲ့အကျိုးရလဒ်ကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။
ဒယ်ပို်င်းထဲကို ရေတစ်ခွက်နဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်အနည်းငယ်ထည့်ကာ ကျိုချက်ပေးပါ။ ကြိုချက်တဲ့အခါမှာ ဆယ်မိနစ်ကနေ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်အထိ မီးအေးအေးနဲ့ ကျိုချက်ပေးပါ။ ဒီကျိုချက်လို့ရလာတဲ့အရည်ကို ကိုယ်ရဲ့ရာသီစက်ဝန်း မတိုင်ခင် တစ်ပတ်လောက်ထဲက မှန်မှန်လေးသောက်ပေးပါ။
ပင်ပွားတစ်ဇွန်းစာကို ရေဇလုံထဲမှာ ညထဲကထည့်ပြီး ကြိုတင်ပြီး ရေစိမ်ထားပါ။ အဲဒီစိမ်ထားတဲ့အရည်ကို မနက်ခင်း ဘာမှမစားခင်အချိန်မှာ သောက်လိုက်ပါ။ အဲဒီအရည်ကို ရာသီမလာခင်တစ်ပတ်လောက်ထဲက ကြိုသောက်ထားရင် ထူးခြားတဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ….နည်းလမ်းတွေကို သိပြီဆိုတော့ ဘယ်နည်းလမ်းက အကျိုးများမလဲဆိုတာ သိစေဖို့အတွက် စမ်းလုပ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကြောင့်တော့ အလုပ်ရှင်ကို မတောင်းပန်နဲ့
by Naw Hsel Hte .4hours ago
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဆင်နွဲကြည့်သင့်တဲ့ ထူးထူးခြားခြားပွဲတော်များ (အပိုင်း ၁)
by Htet Htet . 22 hours ago
အမာခံပရိသတ်တွေ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းစေချင်တဲ့ နာမည်ကြီးတီးဝိုင်းအဖွဲ့များ
by Naw Hsel Hte . 24 hours ago
စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ပျော်အောင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ
by Ngul Ciin . 1 day ago
အကြည့်သင့်ဆုံး Food Show (၅) ခု